Kulan lagu soo Bandhigayay Guulaha Haweenka Puntland oo Garowe lagu Qabtay – Radio Daljir
Maarso 6, 2016 8:56 b 0
Bacaadweyn, 06-March, 2016 -(Daljir)_Wasaradda Haweenka iyo horumarinta qoyska Puntland ayaa maanta oo Axad ah magalada Garowe ku qabatay dood looga hadlayo guulaha ay haweenku ka gaareen arrimaha waxbarashada,siyaasadda iyo arrimaha la xiriira bulsahdda.
Barnaamijkan oo lagu qabtay hoolka shirarka ee wasaradda waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday Hay’addaha caalamiga ah ee wasaradda la shaqeeya, gudoomiyaasha haweenka ee gobaladda iyo hooyooyin kale.
Ahmiyadiisa ayaa lagu tilmaamay inay tahay xaqiijinta dowrka haweenka ee horumarinta xagga bulshada iyo guulaha ay gaareen, wuxuna qayb ka yahay barnaamijka 8-da Maarso oo tan iyo billowga bishaan wasaraddu waday u diyaar garowga iyo kulamo lagu gogal xaarayo.
Agaasimaha Jinsiga ee wasaradda haweenka ayaa sheegay inay muhiimad u lee dahay kulllankan iyo xogta kasoo baxda, gudoomiyaasha haweenka qaar ka mid ah gobalada oo dhankooda hadlay ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in goobta laga sheego guulaha ay haweenku ka gaareen halganka nolasha iyo nabadda.
Maryan Gaduudo oo ah gudoomiyaha haweenka ee Gobalka Bari ayaa ka warantay kaalinta hawenka ee nabadda iyo dhismaha Puntland waxay goobta ka sheegtay haween dhowr ah oo usoo joogay dhismihii Puntland kuwaasoo qaarkood geeriyooday, Maryan ayaa ugu danbayntii ku dhiirigalisay kasoo qayb galayashii kulanka inay mar kasta u istaagaan ka shaqaynta midnimada iyo xal u raaidnta xiisaha dalka ka dhaca sida dagaalada qabaa’ilka iyo kan siyaasadda.
Sarkaalka ugu sareeya Xafiiska QM u qaabilsan arrimaha haweenka ee Puntland ayaa dhankiisa waxa uu taageeray dadaalada wasaradda haweenka ee ay ku horumarinayso haweenka Soomaaliyeed waxa uuna sheegay inay mar kasta ku garab istaagayaan.
Ugu danbayntii wasiirka haweenka Aniso Xaaji Muumin oo shirka soo xirtay ayaa soo jeedisay khudbad dhinacyo badan taabanaysa, wasiirku waxa uu haweenka ku dhiirigaliyay inay mar kasta mideeyaan aragtidooda la xiriirta muujinta awoodooda iyo aqoontooda, waxay sheegtay in aan guul lagu gaari karin ilaa haweenku ay muujiyeen waxay xaqa u lee yihiin diintuna u fasaxday.
Aniso Xaaji Muumin ayaa qirtay wasaradda oo kaliya inaysan waxba qaban karin hase yeeshee ay mar walba u baahan tahay garab istaaga haweenka Puntland, waxayna balan qaaday inay meel kasta u gali doonaan sidii aqoonta iyo garaadka haweenka kor loogu qaadi lahaa.